SILVER CINERARIA: QALABKA DARYEELKA GURIGA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Silver Cineraria: beerashada iyo daryeelka
Cineraria ayaa iska leh qoysaska Astrov, jinka Krestovnik. Waxaa jira noocyo badan oo ah cineraria, waxayna dhammaantood kala duwan yihiin midba midka kale muuqaalka. Waxaa jira ubaxyo geedo ah, geedo qurxoon. Dhammaan noocyada kala duwan waxay leeyihiin qaab kala duwan, midab iyo cabbir.
Noocyada ugu caansan ee cineraria waa cineraria xarrago leh, cineraria dhiig ah iyo cineraria silver..
Marka guriga la joogo, cineraria waa mid dhiig leh, noocyo kaleba waxay ka badan yihiin beerta qurxinta.
Silver Cineraria waxaa loola jeedaa dhirbaaxada, waxay u egtahay muuqaalka baadiyaha hoose ee leh caleemo aan caadi ahayn. Waxaa loo tixgeliyaa dhirta cawska, waxaa loo isticmaalaa sariiraha ubaxa.
Caleenta dhirta ayaa ah mid aad u weyn, la jarjaray, hooska aaladaha, soo jiidashada muuqaalka iyo midabada midabka leh. Inflorescences badanaa waxay u muuqdaan sannadka labaad ee nolosha geedka iyo waxay leeyihiin muuqaal huruud ah.
Ma taqaanaa? Bannaanka u badan ayaa doorbidaya in laga saaro inflorescences ee cineraria lacag - noocan oo kale ah geedka u muuqataa in badan oo soo jiidasho badan. Intaa waxaa dheer, ee sariiraha ubaxa kaalinta ugu muhiimsan ee cineraria silver waa in ay u adeegaan sidii a dhirta for dhirta dhalaalaya.
Noocyo lacag ah iyo noocyo cineraria ah
Silver Cineraria waxaa kale oo loo yaqaan 'miro yar', badweynta cineraria, ashy ama badda. Geedku waa qiyaastii 25 cm oo dherer ah, waxay jecel yihiin qaabka aan caadi ahayn ee caleemaha iyo muuqaalka qumman. Waxaa jira dhowr ka mid ah noocyada ugu caansan ee cineraria badda:
Doonta lacag - waxay koraa ilaa 35 cm, afkoda waa ciriiri, caleemaha si khafiif ah loo kala;
Silverado - wuxuu koraa illaa 20-35 cm, wuxuu leeyahay gooyo qurxiyo oo ah caleemo madow oo caddaan ah;
Boorka Silver waa warshad yar oo leh dherer ah 15-20 cm, waxay leedahay caleemo dhuuban oo khafiif ah oo midabo madow;
Cirrus waa qashin yar (40-45 cm), wuxuu leeyahay oval, xaashiyo dhinacyada geesaha.
Badanaa waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo boodh iyo lacag qalafsan.
Beeridda abuurka loogu talagalay geedo
Waxaa la ogaaday in tijaabinta sida ugu wanaagsan ee ay u koraan cineraria lacag - abuuro abuur for geedo. Foosto la diyaariyey ayaa lagu beeray dhul furan. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo abuuro cineraria silver, si ay geedo xoog leh ka soo baxaan.
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo lagu beeri karo miraha carrada:
Beerista carrada qoyan. Seeds ma lagu cadaadiyo dhulka, dusha sarena waxaa lagu daboolay filim;
Beeridda dhul qoyan. Seeds waxaa lagu rusheeyaa dusha lakabka birta, weelka waxaa lagu daboolay filim;
Seeds lagu beeray dusha sare ee ciidda, ka dibna daboolay warqad khafiif ah oo qoyan biyo.. Marka biqilka, sprout wuxuu jebin karaa warqad khafiif ah, taasoo, markaa, waxay xakameysaa biqilka abuurka.
Seeds ayaa si habboon loogu beeray sanduuqyada ballaaran, maaddaama ay lagama maarmaan tahay in la beero. Ka dib markii hore u koray geedo fasal sare.
Waa muhiim! Cineraria waxaa badanaa lagu koriyaa sida geedka sanadlaha ah. Inkasta oo dhirta ay u adkaysato dhaxan, xaaladaha cimilada waxay ku qabsan kartaa dhulka furan ilaa iyo xilliga dayrta. Haddii aadan daboolin jiilaalka, way dhiman doontaa.
Waqtiga ugu hooseeya ee soo degitaanka
Abuurka Cineraria ayaa lagu beeray ciidda dhammaadka May. Geedo la dhigay geedo diyaarsan. Caleemaha ugu horreeya waxay caadi ahaan soo baxaan 10 maalmood kadib. Dhulka dhulka waxaa lagu sameeyaa 2.5-3 bilood.
Wixii shinni ah ee cineraria marin, substrate waa in la qaato. Carrabku waa inuu noqdaa mid dhexdhexaad ah, iftiin, iyo ka hor inta aan la beeri Karin waa la isku darsan karaa. Xayawaanka yar lihi waxay sidoo kale ku haboon yihiin. Shardiga ugu muhiimsan waa in si wanaagsan loo miiro, hawada - iyo biyo-la iska qaado.
Awoodaha leh dalagyada cineraria waxaa lagu dhejiyaa daaqadaha, halkaas oo ay noqon doonto iftiin badan oo macquul ah. Qorraxdu waxay aad u muhiim u tahay dhirta, waxay ku hoos taal qorraxda inay noqoto mid cad oo buuxa. Laakiin waa inaad doorataa iftiin kala duwan - iftiinka qorraxda tooska ah wuxuu waxyeelo u yahay sprouts.
Waa muhiim! Cineraria ayaa ku kori kara meel la mid ah, laakiin tayada qurxinta ee kiiskan lama sheegi doono.
Waraabiyo iyo buufin geedo
Waraabinta geedo ayaa si gaar ah muhiim ugu ah bilowga hore ee koritaanka. Kuma badin kartid inaad waraabiso, maaddaama tani ay sababi karto horumarinta kalluunka roota. Geedaha abaarta oo kaliya sida ay u adagtahay inay u dulqaataan, markaa ha u oggolaanin inay dhacdo.
Dhaliska iyo bacriminiga
Waxaa muhiim ah in aadan seegin muddada aad u baahan tahay inaad ku darto geedo cineraria. Kala soocid waxay ku lug leedahay ku wareejinta dhirta shuban. Nidaamkan waxaa la sameeyaa marka biqil kasta uu leeyahay 2 buug oo buuxa.
Noocyada daryeelka ee cineraria ee bannaanka u furan
Ka dib markii la beero geedo dhul furan, waxay u baahan tahay daryeel gaar ah. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo daryeelo cineraria lacag:
daadinta waxaa lagu sameeyaa oo kaliya cimilada diiran;
si looga fogaado dhibaatooyinka, ka dib marka ay ka soo degaan waxay u fiicantahay daboolida geedo leh qalabka insulating;
Badanaa, laakiin badanaa ma waraabiyo geedka;
sariiraha cawska leh ee dhirta;
Ma taqaanaa? Waa ku filan in la sameeyo quudinta dheeraadka ah ee cineraria 1-2 jeer bishii. Tani, Bacriminta leh content yar nitrogen ayaa loo isticmaalaa.
Wixii cineraria ah, habka guriga ee taranta guriga leh caawimaadda abuurka abuur waa badanaa ku habboon. Warshadu uma dulqaadanayso qabow daran, sidaa daraadeed habkani waa ubax sii kordhaya waa mid caan ah. Waxa kale oo suurtogal ah in dacaayad laga dhigo iyada oo loo qaybiyo duurka iyo udgoonida.
Dhiirrigalinta abuurka cineraria abuurka ah ee la sameeyey horraantii Maarso. Seeds ay ku rusheeyeen dhulka yar oo dusha sare ah oo daboola dhalada. Ka dib markii miraha koray, waxaa lagu beeray beerta. Maalmaha ugu horeeya ee xagaaga ku darso.
Faafinta qaybta lacagta cineraria ee dhirta waxaa la sameeyaa ka hor inta aan la gaarin muddada ubax. Habkani waxaa loo isticmaalaa si aad u dhif ah.
Si loo kala qaybiyo baadiyaha, waa inaad si taxadar leh u qodo geedka iyada oo aan waxyeello nidaamka xididkeeda. Waa lagama-maarmaan tahay in loo kala qeybiyo si uu baadiyaha cusub u yeesho xididada qaabaysan. Qaybaha goobaha lagu rusheeyey qoryaha qoryaha, ayaa loo oggol yahay inay qalalaan oo ku beeraan meelo cusub.
Diiwaangelinta waxaa sidoo kale lagu faafin karaa jarida. Nidaamkani wuxuu dhacayaa bisha Agoosto.
Warshadu waxay jaraysaa dhammaan gooynta cagaaran, dhererkoodu wuxuu ka badanyahay 10 cm Deyrta (2-3 toddobaad kadib) gooynta waxay qaadataa xidid, ka dib markii ay qoday oo lagu beeray sanduuqyada.
Cineraria waxaa la geeyaa jiilaalka qol diiran, haddii kale dhirta ma noolaan doonto. Guga, marka dhulku kor u kaco, cineraria lagu beeray karaa.
Isku darka dhirta kale iyo doorka naqshada muuqaalka
Cineraria naqshadda muuqaalka ayaa loo adeegsadaa asal ahaan dhirta kale. Waxay xoojineysaa midabada dhalaalaya iyo asalka. Naqshadeeyaha muuqaalka wuxuu abuuri karaa waxyaabo xiiso leh oo laga helo cineraria lacag, tusaale ahaan, waxaa lagu daraa lobelia, petunias, phloxes.
Inta badan, xeebta cineraria waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro ubax. Beeray cidhifyada cineraria, iyo dhexda - ubaxa ah ee midabo kala duwan. Sidoo kale caawimadeeda badanaa waxay abuuraan qaababka ubaxa.
Dhibaatooyinka beerista suurtagalka, cudurada iyo cayayaanka
Haddii, marka koray on cineraria, dhibco brown casaanka u muuqan, geedka waxaa ka mid ah kulaylka iyo abaarta. Haddii dusha sare ee duurka aan weli la saameeyey, waa la kala saari karaa oo rujin karaa si loo sameeyo warshad cusub.
Haddii caleemaha ay soo iibsadeen muuqaal la yaab leh, waxay u badan tahay in caaryadu ay koraan xididada. Xaaladdan oo kale, u baahan tahay in yar oo biyo waraabiyo.
Main cayayaanka, kuwaas oo laga helay cineraria, - caarada iyo caarada caarada. Calaamad u ah caarada caarada ayaa leh caleemo huruud ah oo badan. Dhabarkeeda waxaad arki kartaa burqaan cad oo yaryar - tani waa saxarka laftiisa.
Sababtoo ah calaamadda, cineraria ayaa qalajin kara oo caleemaha iska tuuri kartaa. Sidaa darteed, hubi inaad la dagaallamayso dulinkan. Xalka saabuunta ama xummad kasta oo dhibic ah ayaa ka caawisa dhibaatadan.
Si loola dagaallamo aphids, silver cineraria lacagta lagu buufin karaa cayayaanka ama tincture nettle. Haddii weerarku aanu ahayn mid aad u badan, aphids waxaa laga soo qaadi karaa gacanta.
Xaaladaha qolka, cineraria waxaa laga yaabaa in ay saameeyeen mycosis iyo gariir goor dambe. Si looga hortago dhibaatooyinkan, qolka waa in la sii daayo inta badan.
Silver cineraria lafteeda waa mid aad u qurux badan, xitaa xilliga dayrta, marka ubaxyo kale oo hore u bloomed, waxay sii wadaa inay ku farxaan isha iyada oo leh caleenta dahabka aan caadi ahayn. Iyadoo tixgelineysa sida ay u fududahay in la ilaaliyo, sida ay u fududahay inay u koraan, iyo sida quruxda badan u quruxda badan, waa cineraria lacagta macquul ah ee cawska iyo geedaha ubaxyada.